Ungabeka kanjani amazwana ngemuva kwe-backlink ukuthuthukisa isikhundla sami sesayithi ku-SERP?
Mhlawumbe uzwe ulwazi oluningi olwesabekayo mayelana nokwakha ama-backlinks amazwana nokungahambi kahle kule nqubo. Kodwa-ke, ngifuna ukuthi uthathe isikhashana bese usondela kuleli qhinga ngemicabango evulekile. Naphezu kwedumela elibi laleli qhinga, ukusebenzisa ukuphawula kwebhulogi njengeqhinga le-backlink kungakusiza ukuba uthole ubuhlobo obuhle namakhasimende akho akwaziyo nokwakha igunya lakho lomkhiqizo ngaphakathi kwe-niche yakho yemakethe - eleaf istick 30w refilling. Kodwa-ke, udinga ukwenza indlela efanele yokudala ama-backlinks amazwana ukuze uthole imiphumela emihle ye-SEO. Uma kungenjalo, uzobukeka usolisayo emehlweni enjini yokusesha futhi ungathola ngisho nezinhlawulo zamasu wokwakha izixhumanisi ze-spammy.
Kulesi sihloko, sizoxoxa ngezindlela ezintsha zokuthola ijusi lokuxhumanisa kusuka kumazwana. Ungakhohlwa konke okufundile ngaphambili. Indlela esizoyabelana ngayo ayibonakali njengezinye izici zokwakha izixhumanisi ezidinga ukusebenzisa ukulandela, ukulandela, ukucinga noma ezinye izinto ozivame ukuzithola.
Indlela entsha yokuthola amazwana emuva kokuphendula
Ake sixoxe ukuthi yiziphi izigaba ozodinga ukuzilandela ukuze uthole ama-backlink ama-quality angakapheli isikhathi esifushane.
Thola amabhulogi alungile
Esigabeni sokuqala somkhankaso wokwakha umxhumanisi wakho, udinga ukuthola amabhulogi alungile wokudala izixhumanisi zakho lapho. Udinga ukuqhuba ucwaningo lwakho lwe-niche emakethe futhi uthole imithombo yewebhu ethola imoto emnandi kakhulu nokubandakanya. Akusobala ukuthi ubheke amabhulogi embonini kakhulu. Esikhundleni salo, ungathola amabhulogi we-PR maphakathi noma amaforamu anenani elibalulekile labahlaziyi abakhuthele kuwo.
Ukuze uthole okudingayo, ungafaka kuphela umbuzo othile ku-Google. Ngokwesibonelo, uma ibhizinisi lakho linikezwa enkampanini yezokwelapha, ungacela injini yokusesha umbuzo "TOP blogs medical" noma "amaforamu odokotela. "Ngenxa yalokho, uzohlinzeka ngohlu lwe-blogs TOP ngokususelwa kwezinye izabelo zomphakathi kanye namazwana lawo ma-blogs athola.
Uma usutholile kufanelekile ebhizinisini lakho udinga imithombo yewebhu, ungaqhubeka igatsha ngaphandle kwezixhumanisi ezilandelayo kusuka kubathengi kubhulogi yabo. Kuzokusiza ukwandise isisekelo sakho sezingosi zomlingani.
Ukuhlela amabhulogi wakho
Sebenzisa ukubhaliswa kwe-RSS ku-Google Reader ukugcina ithrekhi yamabhulogi embonini yakho. Dala amafolda ahlukene kwi-website ngayinye yesihloko. Ukwehlisela le nqubo, uzobona ukuthi yiziphi izigaba ezinokuthunyelwe okubuyekezwe kamuva.
Zama ukuba ngowokuqala
Akunakucelwa ukwakha ama-backlinks amazwana esithangamini esicasulayo ngendlela nje ebhala ngokungabi nalutho, ukuphawula kogaxekile. Ungaba ngowokuqala oshiya amazwana ngaphansi kokuthunyelwe, kodwa emva kokuba ufunde ngokucophelela futhi ucabange ngempendulo ehlakaniphile nenengqondo. Uma isixhumanisi sakho esiyinhloko sihlanganyela futhi sinamathela iphuzu, abanye abaphawula bazochofoza kakhulu ukuze bahlole ukuthi ungubani. Yingakho uma ungowokuqala, izinguquko zakho ziphakeme kunalokho uma ufika emcimbini ngemuva kokunye okuphawulayo.